राेचक – Radiokathmandu राेचक – Radiokathmandu
-कूल तामाङ यो समय सोशल मिडियाको समय हो ।यहि सोशल मिडियाबाट धेरैले चर्चा कमाएका छन ।कतिले राम्रो काम गरेर चर्चा कमाए त कतिले खै कसरी भनुम् अँ तपाईले बुझिसक्नुभयो । यहि सोसल मिडियाबाट कतिको घरबार…
नेपालको मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ -देउवा
५ भदौं, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले नेपालको मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । शनिबार ललितपुरमा ज्यापु समाज ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेदन भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको कला…
दाेलखाकाे वोच प्रहरी चौकीमा आगलागी
२९ साउन, काठमाडौं । दोलखामा एक प्रहरी चौकीमा आगलागी भएको छ । जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका ८ वोचमा अवस्थित वोच प्रहरी चौकीमा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय दोलखाले जनाएको छ । विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको…
हराएका श्रीमानको टिकटिकमा भिडियो देखे पछि…
१ असार, काठमाडौं । हराएको ३ बर्ष पछि एक महिलाले आफ्नो पतिलाई टिकटकमा भेटाएकी छन् । यो घठना भारतको तामिलनाडुको हो ।भारतको तामिलनाडूमा एक महिलाले आफ्नो पति सुरेश हराएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन् ।…
२४ जेठ,काठमाण्डौ ।मुसा भन्ने बित्तिकै हामी उपद्रो मच्चाउने जीबका रुपमा लिन्छौँ । हामी कहाँ हुने मुसाले बिगार गर्ने बाहेक अरु केहि पनि गर्दैनन । खेत,करेसाबारी खन्ने,राखेका कपडा काट्ने,भान्सामा भएका सबै चिज खाईदिने,अनि दुलो खन्ने गर्छन।…
भारत पछि मालीमा एक महिलाले जन्माईन ९ बच्चा
२५ बैशाख, काठमाडौं । तपाईले आज सम्म एक महिलाले एकै पटकमा कति वटा सम्म बच्चा जन्माएको देख्नु भएको छ ? एक वटा वा बढीमा २ वटा सम्म हुन सक्छ । केहि बर्ष अघि नुवाकोटकी २८…
१२ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक सुरुभएको छ । बैठक केही बेर अघि सभापति शेर बहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा सुरुभएको हो । पूर्वपदाधिकारी तथा केही केन्द्रीय सदस्यलाई समेत बोलाइएको बैठकले पार्टीको…
चैत, काठमाण्डौं । कतिपय घटनाहरु सुन्दा पनि पत्यार नलाग्ने खालका हुन्छन । अष्ट्रेलियाको जंगलमा एउटा अनौठो घटना घटेको छ । पाँच वर्षदेखि जंगलमा हराइरहेको भेडा भेटीए सगैं भेडाको शरीरबाट ३५ किलो ऊन निकालिएको छ ।…
गधाकाे दुधबाट बन्छ संसारकै महंगाे पनिर
चैत, काठमाण्डौं । संसारका हरेक मानिसको ‘फुड चेन’मा राम्रा,स्वादिष्ट र महँगा खाद्य पदार्थ रहेका छन् । यस क्रममा अति प्रचलित खाध्य पदार्थ पनीर पनि हो । अधिकांश मानिसले पनीरलाई बडो रुचिका साथ खाने गर्छन् ।…
२४ माघ, काठमाण्डौ । विश्वमा असंख्य गुफाहरु छन्, ति मध्ये कतिपय गुफाहरु निकै विचित्र र रहस्यमयी छन् । गुफाहरुमा नि कुन गुफा ठूलो होला त ? जिज्ञास हुन सक्छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो गुफा भियतनामको…